မကျြမှနျလညျးမလှတျ ဆံပငျတှလေညျး ကြှတျနသေူမြားအတှကျ ဆေးနညျး – Daily Feed MM
Admin_John | November 8, 2020 | Lifestyle | No Comments
ယနညေ့ လကျတှစေ့မျးကွညျ့တာ.ဆား(၅၀)ကပျြသားလောကျ ရနှေေးနဲ့ ခွထေောကျကိုနာရီဝကျလောကျ စိမျထားပွီး ခွဖေဝါးကို ဆားနဲ့ပှတျတာပွီးတော့ ပွောငျအောငျ သဘကျနဲ့ သုတျလိုကျပါ ။ဒူးအောကျကနေ ရနှေေးလေးနဲ့ လောငျးပွီး ဆေးလညျး ရပါတယျ။
ကိုယျမှာ ခြှေးမြားထှကျလာပွီးညောငျးတာ ကိုကျတာ ပေါ့သှားတယျ။အပူလညျး တျောတျောထှကျတယျ။ဒီနညျးအတိုငျး သုံးရကျလောကျ လုပျကွညျ့မယျ ဆိုရငျညောငျးတာ ကိုကျတာ အပူမြားတာ ကနျြတဲ့ ရောဂါတဈခြို့သကျသာလာမှာ သခြောတယျ။ထို့ကွောငျ့
ကနျြးမာရေးကိုလိုကျစားသူမြား စမျးကွညျ့ပါ။အကြိုး မယုတျပါဘူး။#နောကျတဈနညျး…?နစေ့ဉျ အခြိနျမှနျ ညအိပျရာဝငျနီးတိုငျး ဆားနငျးခွငျး,ဆားနငျးရငျ ကိုယျတှငျးအောငျး အပူတှေ ထှကျစသေညျ။#နငျးပုံ နငျးနညျးကတော့….?မနကျခငျး ခွထေောကျကို
ပေါငျရငျးကစပွီး ရလေောငျးဆေးပါခွောကျအောငျသုတျပါ။(ဆား ၁ ပိဿာ၂ ပိဿာဆို ပိုကောငျး)ဆနျ့တဲ့ ဇလုံကွီးထဲထညျ့ပွီး နငျးပါ။နာရီဝကျလောကျ ဆကျတိုကျနငျး နရေငျးနဲ့ခွထေောကျက ခြှေးမြားထှကျလာတာ တှရေ့ပါတယျ။မိနဈ ၃၀ – ၄၀ ၁.နာရီ ကိုယျ
ကနြေပျသညျ အထိ နငျးပွီးတာနဲ့မနကျခငျး အသငျ့ဆောငျထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခွထေောကျကို ဆားဇလုံထဲ ပှတျခပြွီးဆားတှပွေောငျအောငျ သုတျပါ။ခွထေောကျကို လုံးဝ လုံးဝ ရပွေနျမဆေးရပါ။ခွထေောကျပွောငျတာနဲ့ အိပျရာဝငျပါ။ပထမနမှေ့ာပဲ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောပါ
မယျ။အကွောပွေ ခွကေဉျြ ထုံနာတှေ ပြောကျကငျး။ခွကှေဲခွငျး မရှိပါ။ဆံပငျမကြှတျတော့ နဂိုဆံပငျသနျသူတှေ ပိုပွီး သနျလာမညျ။ကနျြးမာခွငျးကို အားပေးမညျ။ရှယျပေးခွငျးဖွငျ့ ကုသိုလျ ယူပေးကွပါ။
(( အနာရောဂါကငျး၍ ကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစေ ))
ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ.ဆား(၅၀)ကျပ်သားလောက် ရေနွေးနဲ့ ခြေထောက်ကိုနာရီဝက်လောက် စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာပြီးတော့ ပြောင်အောင် သဘက်နဲ့ သုတ်လိုက်ပါ ။ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီး ဆေးလည်း ရပါတယ်။
ကိုယ်မှာ ချွေးများထွက်လာပြီးညောင်းတာ ကိုက်တာ ပေါ့သွားတယ်။အပူလည်း တော်တော်ထွက်တယ်။ဒီနည်းအတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်ညောင်းတာ ကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ ရောဂါတစ်ချို့သက်သာလာမှာ သေချာတယ်။ထို့ကြောင့်
ကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားသူများ စမ်းကြည့်ပါ။အကျိုး မယုတ်ပါဘူး။#နောက်တစ်နည်း…?နေ့စဉ် အချိန်မှန် ညအိပ်ရာဝင်နီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း,ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်း အပူတွေ ထွက်စေသည်။#နင်းပုံ နင်းနည်းကတော့….?မနက်ခင်း ခြေထောက်ကို
ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါခြောက်အောင်သုတ်ပါ။(ဆား ၁ ပိဿာ၂ ပိဿာဆို ပိုကောင်း)ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ။နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်း နေရင်းနဲ့ခြေထောက်က ချွေးများထွက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။မိနစ် ၃၀ – ၄၀ ၁.နာရီ ကိုယ်
ကျေနပ်သည် အထိ နင်းပြီးတာနဲ့မနက်ခင်း အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခြေထောက်ကို ဆားဇလုံထဲ ပွတ်ချပြီးဆားတွေပြောင်အောင် သုတ်ပါ။ခြေထောက်ကို လုံးဝ လုံးဝ ရေပြန်မဆေးရပါ။ခြေထောက်ပြောင်တာနဲ့ အိပ်ရာဝင်ပါ။ပထမနေ့မှာပဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ပါ
မယ်။အကြောပြေ ခြေကျဉ် ထုံနာတွေ ပျောက်ကင်း။ခြေကွဲခြင်း မရှိပါ။ဆံပင်မကျွတ်တော့ နဂိုဆံပင်သန်သူတွေ ပိုပြီး သန်လာမည်။ကျန်းမာခြင်းကို အားပေးမည်။ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ် ယူပေးကြပါ။
(( အနာရောဂါကင်း၍ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ))
အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ ကိုယျတိုငျလုပျစားနိုငျမယျ့ ပုစှနျခဉျြ/ ငါးခဉျြလုပျနညျး (ရုပျသံ)
ကိုဗဈ Positive ဖွဈနတေဲ့ ဖခငျကို ကူးမှာမကွောကျပဲ ပွုစုပေးနတေဲ့ သားအလိမျမာလေး